DOORASHADA KOOFUR GALBEED: Ciyaartoyada Golaha Kismaayo Vs Nabad & Nolol oo fooda is daraya - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/DOORASHADA KOOFUR GALBEED: Ciyaartoyada Golaha Kismaayo Vs Nabad & Nolol oo fooda is daraya
Xarunta Baydhaba ee Dawlad gobaleedka Koofur galbeed ayey toos uga bilaabatay Ciyaartii is reeb-reebka Koobka 17 November.
Finaalka Ciyaarta oo laba Asbuuc kaliya ka dhimantahay ayey bilaabeen 4 kooxood oo wata dhammaan qalabka Ciyaaraha iyo Kaptano si fiican u taba-baran, waxaana si diiran usoo wada dhaweeyey taageerayaal ku kala hubaysan Calamada Koofur galbeed, Puntland, Jubbaland iyo Benaadir.
A. Wareegii koowaad ee is reeb reebka October waxaa ku haray kooxdii Kaptan Roobow oo Garoonka kusoo gashay dardar culus, sacab iyo mashxaradna lagu soo dhaweeyey lkn Gool hayihii iyo difaacii ayaa ka dhaawacmay waxa ayna waayeen cid ay ku bedelaan, sidaas ayeyna ugu hareen is reeb-reebkii koowaad. In kasta oo aysan weli ka bixin garoonka lagana yaabo in ay Ciyaartoydii uga hartay weerarkii hore ay ku caawiyaan qaar ka mid ah Kooxaha soo haray.
B. Kooxda Isbedel-doon ee Kaptan Fargeeto ayaa is ar aragii koowaad ku daalay, Ciyaatoydii ay la tageena qaar laga iibsaday, Gurmad ay ka sugayeen Xizbiyada Xamarna kasoo daahay, sidaas awgeed dadka Ciyaaraha Falanqeeya ayaa aaminsan in ay ku hari doonaan wareega koowaad ee is reeb-reebka labaad, lagana iibsan doono Ciyaartoyda usoo harta.
C. Kooxda Golaha Kismaayo ee Kaptan Shariif oo tababar sare kusoo qaatay Garoowe, lana dalacsiiyey, casharana ay soo siiyeen Macalimiin khubaro ku ah arrimaha Ciyaaraha, loona balan qaaday gurmad Ciyaartoy Keyd ah oo ka kala imaan-doonta Garoowe iyo Kismaayo haddii lagu biya keeno Kaptan Shariif.
D. Kooxda Nabad iyo Nolol ee Kaptan Lafta-gareen oo taba-bar culus ku qaatay Benaadir, lana tegay Baydhabo Ciyaartoy aad looga cabsaday: Gool hayaha, Difaaca iyo Weerarka sida: Cabdi Bile, Mo Farah, Ronaldo, Mohamed Salah iwm.
Dadka Ciyaaraha Falanqeeya ayaa aaminsan in labada Kooxood ee C & D ay Koobka 17 October isugu hari doonaan, lagana yaabo in ay u baahdaan Rigoore, haddi aysan kala reebin Ciyaartoy Gurmad ah oo laga filayo in ay ka soo kala gaarto Benaadir iyo Garoowe.
Dadka reer Koofur galbeed ee Ciyaaraha taageera ayaa wel wel iyo walaac ka qaba Kooxdii ay taageeri lahaayeen!
Haddii ay taageeraan kooxda Benaadir ee laga badiyo in ay ka aar-goosato Kooxda Garoowe, kana dhigto Luqadda Ciyaaraha Af Maxaatiri.
Haddii ay Garoowe taageeraan ee Benaadir ka Guulaysata-na in Ciyaaraha oo dhan Xamar loosoo raro.
Calan-haye yaasha labada Kooxood ee 3 da Gole ee Federaalka ayaa Gacmihii daaleen sidii ay kor ugu hayeen Calanka Ciyaarta, iyaga oo ka baqaya haddii ay dabciyaan Calanka iyo Ala-laasaha in Garoonka Ciyaaraha laga saaro, gaar ahaan haddii ay Kooxda Garoowe Guuleysato waxa ay Khatar ugu jiraan in Ciyaar oo dhan laga fadhiisiyo 2020 ka, haddi aysan Calanka iyo Qeylada kor u qaadin hadda.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka oo ah kaliya Gudiga Garsoorka Ciyaaraha Gobalada ee haysta Sharciyada Aarbitaraha ayaa laga yaabaa in ay Cadaaladeeda duraan Kooxda Garoowe ee Kaptan Shariif, halka laga yaabo in ay soo dhaweyso Kooxda Nabad iyo Nolol ee Kaptan Lafta-gareen.
W/Q: Max’ed Nur Gacal
Lafta-gareen Nabad iyo Nolol Sharif xasan